Global Voices teny Malagasy » Manambara Ny Fitokonany Tsy Hisakafo Ao Amin’ny Fonja Foibe ao Hama Ireo Gadra Syriana Noho Ny Fahatongavan-Tsainy · Global Voices teny Malagasy » Print
Manambara Ny Fitokonany Tsy Hisakafo Ao Amin'ny Fonja Foibe ao Hama Ireo Gadra Syriana Noho Ny Fahatongavan-Tsainy
Voadika ny 22 Avrily 2019 4:00 GMT 1	 · Mpanoratra Methal Dabaj Nandika (fr) i Gaétane Lefèvre, nirinandrea
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
“Miantehitra amin'ny maha-olombelona anareo izahay hamarananay ny fanaintainanay ary hanamaivana ny fijalianay” – Pikantsary avy amin'ny fantsona Youtube an'ny SY Plus. Loharano .
(Lahatsoratra nivoaka voalohany ny 30 Novambra 2018)
Alatsinainy 12 Novambra 2018, nandefa hafatra ho an'ireo Syriana rehetra sy ho an'izao tontolo izao avy ao amin'ny fonja foibe ao Hama ireo gadra noho ny fahatongavan-tsainy, tamin'ny alalan'ny fandefasana lahatsary fohy .
Mazava ny hafatr'izy ireo : manomboka mitokona tsy misakafo ry zareo.
Eo aloha indrindra, lehilahy telo milaza ny tenany ho Kristiana, Alaoita ary Sionita sady miaraka manambatra io hafatra feno fahasahiana io.
Eny aoriany, voafonja maromaro mitazona takelaka izay milaza hoe “eny ho an'ny fahasamihafana sy ny fisarahan'ny fahefana sy fivavahana” ary mandà ny tsy fanekena ny hevitry ny hafa sy ny fanindrahindràna olona. Miantefa amin'izao tontolo izao sy amin'ireo Fikambanana Tsy Miankina mpiaro ny zon'olombelona izay manodina ny masony tsy mijery ny fijalian'izy ireo ny takelaka sasany.
Mamaky hafatra ireo mpitarika telo izay tena mitalaho amin'ireo Syriana avy amin'ny antokom-pinoana rehetra, ny fiaviana rehetra sy manerana izao tontolo izao, mba handinika ny fanaintainan'izy ireo sy hanao zavatra mba hanamaivanana ny fijalian'izy ireo :
Efa an-taona maro izay no nijalianay taty amin'ny efitra figadranay, toy ny miala aina isaky ny mifoaka rivotra, ary mikaikaika isaky ny mamoaka rivotra. Manan-jo hiaina izahay ary tokony ho jerena akaiky ny olanay.
Ity fitokonana tsy hisakafo ity dia manamarika ny fahavononan'izy ireo hanohitra ny fitazonana tsy ara-drariny azy ireo sy ny fanamelohana tsy araky ny lalàna azon'izy ireo. Manamarika ny fahavononan'izy ireo ho re.
Io antso io dia natao taorian'ny lalàna iray navoakan'i Dunia Feras – mpitsara voafidy avy amin'ny tribonaly miaramila – sy ireo manampahefana avy ao amin'ny governemanta, izay nilaza ny tsy maintsy hamindrana voafonja 11 ho any amin'ny fonjan'i Saidnaya. Rehefa mitambatra, miisa 68 ny olona – anisan'izany ireo zaza tsy ampy taona – tokony hiatrika fitsarana manoloana ny tribonaly miaramila ao anatin'ny zotram-pitsaràna, miaraka amin'ny fahazoana antoka fa tsy hahazo sazy mavesatra loatra izy ireo.
Kanefa, milaza ireo gadra ireo fa toky fitaka fotsiny ihany izany fanomezana antoka izany .
Faritan'ny Amnesty International ho toy ny tena “Famonoana Olombelona” ny ao Saidnaya, toerana fandefasan'ny fitondrana Syriana ireo voafonja mba ho vonoina ho faty. Nanombana ny Amnisty  fa tamin'ny volana Martsa 2011 ka hatramin'ny Desambra 2015 dia olona efa ho 13 000 no namoy ny ainy tao – noho ny fitazonana azy ireo na vokatry ny famonoana tsy ara-dalàna.
Araka izany, amin'ny fahafantarana tsara izay miandry azy ireo any Saidnaya, nolavin'ireo voafonja ny baiko nomen'i Dunia handefa ireo mpiara-mifonja aminy ary notakian-dry zareo ny antsipiriany bebe kokoa momba ny fanamelohana azy ireo.
Nalefan'ilay mpitsara, araka izany, ny lisitra iray ahitàna didim-pitsarana 68, anisan'izany ny fanamelohana ho faty 11, fanamelohana higadra mandra-pahafaty maro, ary sazy 12 taona an-tranomaizina sy 29 eo am-piandrasana ny fitsarana noho ny tsy fisian'ny fiampangana.
Ny ankamaroan'ireo gadra 260 noho ny fahatongavan-tsainy tao Hama dia ny fitondrana Syriana no nampiditra am-ponja azy tany am-piandohan'ny revolisiona, ny taona 2011 sy 2012. Tao anatin'ny fijoroana vavolombelona amin-kitsimpo nalefan-dry zareo tamin'ilay rakipeo , milaza ny tenany ho mpanao fihetsiketsehana am-pilaminana tsy nanao ratsy izy ireo, afa-tsy ny nihira ireo “hira ho an'ny fahafahana”.
Raha niresaka tamin'ny iray tamin'izy ireo ny Global Voices tamin'ny fampiasa iray anaty finday, dia nanazava izy hoe :
Tsy nanana lasa politika na antoko aho. Naniry fotsiny Siria iray vaovao aho, ka nanatevin-daharana ireo mpiray tanindrazana amiko nandeha nanao hetsika am-pilaminana teny an-dalambe, tsy nisy fitaovam-piadiana. Nofy sarotra takarina ilay izy.
Ny Fonja foibe ao Hama
Nanomboka ny volana Mai 2016, lasa teo ambany fifehezan'ireo gadra ny fonja foibe ao Hama, taorian'ny fitroarana nateraky ny famonoana gadra roa. Nafindra tany Saidnaya moa ireo gadra roa ireo mandra-piandriny ny fitsarana azy – avy eo novonoina. Avy eo, nilaza izany vaovao tao Saïdnaya izany tamin'ireo namany tany am-pigadrana tany Hama ireo fianakaviany, ary nanomboka nitroatra ireo voafonja sisa tavela hanohitra ny famindrana nomanina hatao amin'ireo efatra hafa.
Mbola mitohy mandraka ankehitriny ny tsy fankatoavan'ireo voafonja.
Nandritra ny andro voalohany tamin'ny fikomiana, niezaka naka ny fifehezana ny fonja ny governemanta  tamin'ny alalan'ny fanafihana an'habakabaka notanterahan'ny sampam-pitsikilovan'ny tafika an'habakabaka siriàna, malaza amin'ny herisetra fanaony.
Fa ny fampielezana mafy tanaty haino aman-jery mikasika izany tsy fankatoavana izany no nanery an'i Rosia hiditra an-tsehatra mba hahazoany antoka fa tsy ho voadaroka baomba intsony ilay tranomaizina ary hikatsaka fifanarahana amin'ny fandinihana ny fitakian'ireo gadra ny governemanta Syriana.
Vokatr'io fifanarahana io, nanangana komity nivory tao anatin'ilay fonja ny fitondrana Syriana mba hanamaivanana ny sazin'ireo gadra miisa 400. Hatramin'izay fotoana izay, efa nisy ireo voafonja sasany no navotsotra. Saingy tamin'ny Aprily lasa teo, naato ary notapahana ity dingana ity avy eo, taorian'ny famoahana olona 40 .
Mbola misy ampahany kely amin'ireo Siriana migadra noho ny fahatongavan-tsainy no mbola voatazona noho ny antony maro samihafa any amin'ny fonja sivily toa an'i Hama. Na izany aza, ny ankamaroany dia nalefa any amin'ny fonjan'ny miaramila na koa toby fitazonana miafina ampiasain'ireo sampana fiarovana maro. Ny tambajotra Siriana mpiaro ny zon'olombelona dia nanombatombana fa olona maherin'ny 95 000 no tratry ny fanjavonana an-terisetra , ka teo an-tanan'ny fitondrana Syriana ny 85% tamin'ireny.
“Fanampian'ny vintana”, hoy ilay voafonja iray tany amin'ny fonjan'i Hama rehefa nanontaniana azy ny antony nahatonga azy ho niafara tao amin'ny fonja sivily iray :
Rehefa afa-po tamin'izay nataony tamiko ry zareo taorian'ireo fampijaliana sy ny famotopotorana, efa feno avokoa ny fonja miaramila rehetra, dia teto no niafarako.
Na eo aza ny toejavatra sarotra ao amin'ny fonja foibe ao Hama, dia tsy mampiseho ny zavatra iainan'ireo Siriana maro voafonja izany toejavatra izany. Gadra iray hafa ao Hama no mamaritra ny fahadiovan'ny toeram-pamonjana ho ratsy lavitra noho izany- “tena famonoana olona faobe” :
The real tragedy isn’t here, the real tragedy is the prisoners who are kept under the ground, who cannot tell day from night, who die each day a thousand deaths, who are being tortured and mutilated every day. I do not know what to tell you, even Caesar photos  are a small portion of the reality. For those prisoners, they wish for death, because death is a lot more merciful than their suffering.
Tsy eto no tena loza, ny tena loza dia ny gadra any ambanin'ny tany, izay tsy afaka manavaka ny atoandro sy ny alina, izay miaritra fahafatesana an'arivony isanandro, tsy mitsahatra ampijaliana sy ratraina isanandro. Tsy fantatro izay tokony holazaina aminao, na ny sarin'i Cesar  aza dia ampahany kely amin'ny zavatra tena misy. Ho an'ireo gadra ireo, faniriany ny ho faty, satria mety maivana lavitra noho ny fijalian'izy ireo ny fahafatesana.
Nandritra ny taona maro, tsy noraharahian'ny fiarahamonina iraisampirenena ireo Siriana voafonja noho ny fahatongavan-tsaina  ireo. Manoloana ny fahamaikan'ny toedraharaha izao , manontany ity gadra ity :
Aiza ilay izao tontolo izao izay milaza fa mivoatra ? Aiza ireo fitsarana momba ny zon'olombelona ? Aiza ny Firenena Mikambana ? Aiza izy rehetra ? Ny fahatsiarovan-tenan'izao tontolo izao, aiza izy izay ?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/22/132716/
 Nanombana ny Amnisty: https://www.amnesty.org.uk/press-releases/syria-13000-secretly-hanged-saydnaya-military-prison-shocking-new-report
 tamin'ilay rakipeo: https://twitter.com/hadialbahra/status/1064167483332915200
 niezaka naka ny fifehezana ny fonja ny governemanta: https://www.aljazeera.com/news/2016/05/inmates-syria-hama-prison-capture-regime-officials-160528164439933.html
 famoahana olona 40: https://syria.liveuamap.com/en/2018/10-april-syrian-government-releases-40-prisoners-on-political
 95 000 no tratry ny fanjavonana an-terisetra: http://sn4hr.org/blog/2018/08/30/52622/
 Caesar photos: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-35110877
 sarin'i Cesar: https://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/la-routine-de-l-horreur-du-regime-syrien-l-histoire-des-photos-macabres-de-cesar_1721619.html
 voafonja noho ny fahatongavan-tsaina: https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/04/2011414104949575606.html